ဘာကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးတွေ အောင်မြင်/ကျရှုံးရလဲ | Home
Home› Life› Relationship› ဘာကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးတွေ အောင်မြင်/ကျရှုံးရလဲ› ဘာကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးတွေ အောင်မြင်/ကျရှုံးရလဲ
အိမ်ထောင်သည်တိုင်းဟာ ကိုယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု၊ ဒဏ်ရာအနာတရတွေကို အနည်းနဲ့အများ ခံစားခဲ့ဖူးကြတဲ့ သူတွေချည်းပါ။ အဓိကဇာတ်ဆောင်နေရာကနေ ကိုယ်တိုင်ကပြရမယ့် မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ ဇာတ်ထုတ်ကောင်း တစ်ခုလား၊ အလွမ်းအဆွေးတွေနဲ့ အဆုံးသတ်ရမလားဆိုတာ ဖန်တီးသူရဲ့ လက်ရာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်သွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကို သွားနိုင်ဖို့ လက်ရှိအနေအထားဟာ ဘယ်လိုလည်းဆိုတာကို အရင်ဆုံးသိအောင် ဆန်းစစ်မှုတွေ လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေ လုပ်ဖို့ အောက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ကြည့်ရအောင်ပါ။ ဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အဖြေကို ဖြေပေးရပါမယ်။ (ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အိမ်ထောင်ဖက်နှစ်ဦးလုံးဖြေရပါမယ်။ တစ်ဦးက မအားဘူးဆိုရင် တစ်ဦးနေရာကနေပြီး ဖြေပေးရပါမယ်) ပေးထားတဲ့ မေးခွန်းတစ်ဝက်က အဖြေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်အခြေအနေဘယ်လိုလည်း သိနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ သင်ဟာ ဘယ်လို လူစားမျိုးလဲ၊
အိမ်ထောင်ရေး ပဋိပက္ခကို ရှောင်ဖယ်တတ်တဲ့သူလား Conflict Avoider?
၁။ သူစိတ်ထိခိုက်မှာစိုးလို့ မိမိရဲ့ စိတ်ခံစားချက် အတော်များများကို မကြာခဏ ကွယ်ဝှက်တတ်ပါတယ်။
၂။ စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ ဘာကြောင့် ဒီလို သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လည်းဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ဆန်းစစ်လေ့လာဖို့ လုပ်သင့်တယ်လို့ မထင်ဘူး။
၃။ ပဋိပက္ခအတော်များများကို အချိန်ကုန်ဆုံးစေခြင်းနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းပါတယ်။
၄။ စိတ်အလိုမကျဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဒီအလိုမကျမှု ပျောက်သွားတဲ့အထိ တစ်ယောက်ထဲနေရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။
၅။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြသရခြင်းကို သိပ်မနှစ်သက်ဘူး။
၆။ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ အတွေးတွေကပဲ အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာအတော်များများကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
၇။ ပြဿနာတွေကို ပြောကြ၊ ငြင်းခုံကြပေမဲ့ ဒါဟာ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုလုံးအတွက် အရေးမကြီးပါဘူး။
၈။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ခင်ပွန်း/ဇနီးမယား ကဏ္ဍ သီးခြားစီ ရှိသင့်ပါတယ်။
၉။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကိစ္စအတော်များများကို မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။
၁၀။ သဘောမတိုက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို တစ်ဖန် ထပ်မဆွသင့်ဘူးဆိုတာကို သဘောတူပါတယ်။
၁၁။ သိပ်ငြင်းခုံလေ့ မရှိဘူး။
၁၂။ ကိုယ့်အမြင်ကို သူနားလည်လာအောင် သွေးဆောင်ကြိုးစားဖို့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး။
ပေါက်ကွဲလွယ်တတ်သူ တစ်ယောက်လား (Vol-atile Style)?
၁။ စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းသာ အကောင်းဆုံးပါ။
၂။ မကြာခဏ ကိစ္စရပ်တွေကို တစ်သီးတစ်ခြား လုပ်ပါတယ်။
၃။ ဘယ်လိုရလဒ်ပဲရရ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပွင့်လင်းရိုးသားသင့်ပါတယ်။
၄။ ကိုယ်မကြိုက်တာကို မကြိုက်ကြောင်း ဖော်ပြရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။
၅။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ခင်ပွန်း/ဇနီးနဲ့ ငြင်းခုံရတာကို သဘောကျပါတယ်။
၆။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ သ၀န်တိုခြင်းဟာလည်း တစ်ခါတစ်ရံ ပြဿနာတစ်ရပ်ပါ။
၇။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ်ဆိုတာထက် သူ့ဘ၀ ကိုယ်ဘ၀ဆိုတဲ့ သီးခြားရပ်တည်မှု ရှိသင့်ပါတယ်။
၈။ မကြာခဏ ထမင်းလက်ဆုံ မစားဖြစ်ပါဘူး။
၉။ သဘောထား မတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ ခင်ပွန်း/ဇနီးကို ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် စည်းရုံးရတာ နှစ်သက်ပါတယ်။
၁၀။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ရင်ခုန်ကြည်နူးဖွယ်လေးတွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၁၁။ ဒေါသထွက်နေတယ်ဆိုတာ သိအောင် ပြောရတာကို အဆင်ပြေပါတယ်။
၁၂။ ကိစ္စရပ်ငယ်လေးပဲ ဖြစ်နေပါစေ ပြဿနာ ကို ဖြေရှင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၁၃။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ စိတ်ခံစားချက် အရာအားလုံးကို မျှဝေပါတယ်။
အကျိုးအကြောင်းနဲ့ နေထိုင်တတ်သူလား (Val-idator style)
၁။ နှစ်ဦးသား အတူရှိနေခြင်းဟာ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် ပိုအဓိက ကျပါတယ်။
၂။ အငြင်းအခုံ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာကိုပါ။
၃။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေကို ခင်ပွန်းနဲ့ မျှဝေပြောကြားလေ့မရှိပါဘူး။
၄။ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေး သူသိအောင်တော့ ပြောတတ်ပါတယ်။
၅။ အိမ်ထောင်ရေးက ဆိုးကောင်းတိုင်ပင် အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့အပေါ် အခြေခံမူတည်ပါတယ်။
၆။ အိမ်ထောင်ရေးက ဘာသာတရားအဆုံးအမနဲ့ ယုံကြည်ချက်ပေါ် အခြေခံပါတယ်။
၇။ နှစ်ယောက်အတူရိုက်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေကို မကြာခဏ ပြန်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ “we-ness” ကျွန်တော်တို့ ကျွန်မတို့ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးပါတယ်။
သင့်အိမ်ထောင်ရေးမှာ အချစ်နဲ့ လေးစားမှု အလုံအလောက်ရှိရဲ့လား?
၁။ ခင်ပွန်း/ဇနီး ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို အမြဲမေးမြန်းပါတယ်။
၂။ အိမ်ထောင်ဖက်က ခင်ပွန်း/ဇနီး စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဂရုစိုက်ပါတယ်။
၃။ မကြာခဏ လစ်လျှူရှုခံရတယ်လို့ မထင်ပါဘူး။
၄။ တစ်ဦးစကား တစ်ဦး နားထောင်ပါတယ်။
၅။ တစ်ဦးရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို တစ်ဦးက လေးစားပါတယ်။
၆။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ချစ်ခင်မြတ်နိုးပါတယ်။
၇။ ခင်ပွန်း/ဇနီးက ကောင်းကောင်း ဂရုစိုက်တယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။
၈။ ပြောတာတွေက အရေးပါအရာရောက်ပါတယ်။
၉။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချတဲ့နေရာမှာ အရေးပါပါတယ်။
၁၀။ အိမ်ထောင်ရေးဟာ အချစ်တွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။
၁၁။ ခင်ပွန်း/ဇနီးနဲ့ အတူ အချိန်တွေကုန်ဆုံးရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။
၁၂။ တစ်ဦးအတွက် တစ်ဦး သူငယ်ချင်းကောင်းတွေပါ။
၁၃။ အခက်အခဲတွေရှိတဲ့ အချိန်တောင် တစ်ဦးကို တစ်ဦး နားလည်စာနာကြပါတယ်။
၁၄။ ခင်ပွန်း/ဇနီးအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေပါသေးတယ်။
၁၅။ သူ့ရဲ့ နွေးထွေးမှုတွေကို အမြဲတမ်း ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
ရလဒ်အဖြေက ၇ထက် နဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးရဖို့ ဒီထက် ပိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်...
အိမ်ထောင်ရေးမှာ ဝေဖန်တတ်သူ တစ်ယောက် လား?
၁။ ဘယ်သူ့အမှားလည်းဆိုတာ သိအောင် ဆုံးဖြတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၂။ စိတ်မကျေနပ်မှုတွေကို ဖော်ပြရမှာ မိမိရဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ တော်ရုံတန်ရုံ မကျေနပ်ကြောင်း ပြောလေ့မရှိပါဘူး။
၄။ မကျေနပ်ကြောင်း ပြောဆိုတဲ့အချိန် စိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာ အရမ်းပြင်းထန်ပါတယ်။
၅။ မကျေနပ်ကြောင်း ပြောလိုက်ရမှ ရင်ထဲပေါ့သွားပါတယ်။
၆။ သူ့ကို အပြစ်ဝေဖန်ရင် ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ စကားလုံးလုံးရွေးပြောဆိုမှု မရှိတဲ့အတွက် နောင်တရတတ်ပါတယ်။
၇။ ပြဿနာတစ်ရပ်ကို ဆွဲထုတ်လာမိပြီဆိုရင် ဒီလိုလုပ်ဖို့ အခြေခံအခွင့်အရေး မိမိမှာ ရှိပါတယ်။
၈။ ပြဿနာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဟာ သူ့အပြစ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လက်ခံအောင်လုပ်ဖို့က အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါ။
၉။ မကျေနပ်ကြောင်း ပြောတဲ့အခါ “မင်းက အမြဲတမ်း…” “ ရှင်က ဘယ်တော့မှ” ဆိုတဲ့ စကားစုကို သုံးပါတယ်။
နှစ်ဦးကြား ပြဿနာ ဘယ်လောက်ပြင်းထန်နေပြီလဲ ?
၁။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ဘာတွေ လုပ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအချက်အလက် မျှဝေမှုမရှိဘူး။
၂။ နှစ်ဦးကြား ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ချက်မရှိဘူး။
၃။ ပြဿနာတွေက ရှုပ်သထက်ရှုပ်လို့ ဖြေရှင်းစရာနည်းမရှိဘူး။
၄။ ပြဿနာတစ်ခုခြင်းဆီက အပြင်းအထန် နာကျင်မှုတွေကိုသာ ဖြစ်စေတယ်။
၅။ မတူညီမှုတွေနဲ့ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ သံသယဖြစ်မိတယ်။
၆။ နာကျင်ခဲ့တာတွေအတွက် တစ်ဦးကို တစ်ဦးခွင့်လွှတ်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
၇။ ဆက်ဆံရေးမှာ အလေးထားမှုဆိုတာ မရှိဘူး။
၈။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးချစ်တယ်ဆိုတာ မသေချာပါဘူး။
၉။ နှစ်ဦးသား အနာဂတ်မှာ အတူရှိနေနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာတွေးမိရင် စိတ်ဓာတ်ကျစရာပါ။
၁၀။ နှစ်ယောက်ကြားက ပြဿနာတွေကို စဉ်းစားမိရင် ခါးသီးပါတယ်။
ဘ၀ဟာ မျဉ်းပြိုင်နှစ်ခုလို ဖြစ်နေလား?
၁။ အရင်ကလို ထမင်းလက်ဆုံ သိပ်မစားဖြစ်တော့ဘူး။
၂။ တစ်ခါတစ်ရံ လင်မယားထက် အခန်းဖော်နဲ့ အတူနေရတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
၃။ ကိုယ်က အဖြူ သူက အမည်း ဆိုသလို တူညီတဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ ပိုမိုနည်းလာပါတယ်။
၄။ ဘ၀ဟာ မတွေ့ဆုံနိုင်တဲ့ မျဉ်းပြိုင်လို ဖြစ်နေပါတယ်။
၅။ ကြာလေ တစ်ဦးအကြောင်း တစ်ဦး မသိလေဘဲ။
၆။ အပြင်ကို အတူသွားခဲတယ်။
၇။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အချိန်ဖြုန်းတာထက် သူစိမ်းတွေနဲ့ အချိန်ပိုကုန်ဆုံးမိပါတယ်။
၈။ ပျော်ရွှင်စရာအကြောင်းတွေကို အတူတူ မပြောဖြစ်ဘူး။
၉။ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရှောင်နေတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။
၁၀။ ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို သွားနေတဲ့ သင်္ဘောနှစ်စီးနဲ့ တူပါတယ်။
၁။ အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ထင်တာထက် ပိုအထီးကျန်ဆန်တယ်။
၂။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သိပ် မရင်းနှီးဘူးလို့ ခံစားမိပါတယ်။
၃။ ဒီအိမ်ထောင်ဟာ အဆန်မပါတဲ့ ဗလာတစ်ခုလို့ ခံစားရပါတယ်။
၄။ နှစ်ယောက်အတူရှိနေလည်း ပျင်းစရာကောင်းတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။
၅။ စိတ်ချင်းနီးကပ်သူတစ်ဦးကို တောင့်တမိပါတယ်။
၆။ အထီးကျန်တယ်လို ခံစားမိတိုင်း နာကျင်ရပါတယ်။
၇။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀မှာ အရေးပါသူတစ်ယောက်လို့ မခံစားမိဘူး။
၈။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတယ်လို့ မထင်မိပါဘူး။
၉။ အပယ်ခံတစ်ယောက်လို့ ခံစားမိပါတယ်။
၁၀။ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ကို နားမလည်ပါဘူး။
၁၁။ တစ်ခါတစ်ရံ အဖော်တစ်ယောက် လိုအပ်နေပါတယ်။
၁၂။ ဒီအိမ်ထောင်ရေးကနေ ဖယ်ထွက်သွားချင်ပါတယ်။
အထက်ပါ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ပြီးပြီးဆိုရင် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေကို အနဲနဲ့အများ သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ပြီးပါပြီ။ အနာကိုသိရင် ဆေးရှိပြီဆိုသလို မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို အချိန်မီ ထိန်းညှိကုသနိုင်သဖြင့် ချစ်မိတဲ့သူတိုင်း ကံကောင်းကြပါစေ။
John Gottaman ရဲ့ Why marriages succeed or fail သဲဦးငယ် ကောက်နှုတ်တင်ပြသည်။